Creative Space Design | .
December 30, 2010 by MTZO
၀န်းကျင်ထဲက ဗိသုကာ (Architecture in Environment)
ဒီပိုစ့်မှာ ပထမဆုံးပြောချင်တာက Environment ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဘာလဲက စလိုက်ပါမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ ဘာလဲမေးရင် ကိုယ်နေတဲ့နေရာပေါ့ လို့အလွယ်ဖြေမိမယ်ထင်ပါတယ်။ Wiki မှာတော့ Environment အကြောင်းကို “In general, environment refers to the surroundings of an object.” လို့ဆိုထားပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြီး
ဆိုပြီး Environment ကိုအမျိုးအစားတွေ ခွဲခြားထားပြန်ပါသေးတယ်….။
အမှန်တကယ်ဆိုရရင် Environment ဆိုတာ အတော်လေးကိုကျယ်ဝန်း၊ များပြားပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တွေ (မြေယာတည်ဆောက်ပုံ၊ တောင်ကုန်းတောင်တန်း ကွန်တိုအနိမ့်အမြင့်) စတာတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသမျိုးစုံမှာရှိတဲ့ သက်ရှိတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံ၊ လူသားတွေ ဖန်တီးထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအဆောက်အအုံတွေ၊ မြေကွက်ဟင်းလင်းတွေမှာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လူထုဆိုင်ရာ အပန်းဖြေပန်းခြံ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ စတာတွေနှင့် ရာသီဥတုတွေ အစရှိတာတွေ အကုန်လုံးဟာ Environment ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာနှင့် အကြုံးဝင်နေတာပါ….။ အဲဒီတော့ ဗိသုကာတစ်ယောက်ဟာ Structure တစ်ခု Planning လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Environment ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အရေးပါမှုကို လစ်လျှူရှုမထားသင့်ပါဘူး။ ဗိသုကာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားမှု တစ်ခုဟာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်စပ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲလိုဆက်စပ်မှုမှာ သူ့ဘာသာ သီးခြားရပ်တည် တည်ရှိနေနိုင်တာလည်း ရှိသလို သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာဖြစ်ပြီး ဟာမိုနီဖြစ်နေတာမျိုးလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ အနှေနှင့် ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာတွေ၊ လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ နေရာတွေမှရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေများတွေ့နိုင်ပါသလဲ။ တော၊ တောင်၊ သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊ နောက်အနီးပတ်ဝန်းကျင်က မြို့ကြီး၊မြို့ငယ်တွေ၊ ကျေးရွာတွေ၊ မြို့ရွာအတွင်းက ဈေးဆိုင်တွေ၊ ဆူပါမားကတ်တွေ၊ အိမ်ကြီးတွေ၊ အိမ်လေးတွေ၊ စက်ရုံကြီးတွေ၊ စက်ရုံလေးတွေ စတာတွေကို သတိပြုစဉ်းစားမိပါလား။ အဲဒါတွေကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာမိဖူးပါသလား။ အဲဒီမှာ ဗိသုကာတွေ ဖန်တီးထားတဲ့ အဆောက်အအုံတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ အဘယ်မျှအသားကျနေသလဲ။
အဲဒီအဆောက်အအုံဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟာဇာတဖြစ်ြပီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလွမ်းမိုးနေသလား။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဘယ်မျှ သက်ရောက်မှုရှိသလဲ ဆိုတာတွေ လေ့လာကြည့်ရမှာပါ။ ဥပမာအနေနှင့် New York City’s Mahanttan section တည်ဆောက်မှု နှင့် Log Cabin တို့ နှစ်ခုအကြား Unity ဖြစ်မှု၊ နောက် 110-storey skyscraper နှင့် Yellowstone National park စတာတွေရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုတွေဟာ အင်မတန်နည်းပါးပါတယ်။ အဲဒီတော့ Log Cabin ဟာ New York City ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင် မသင့်လျှော်သလို skyscraper တွေကို Yellowstone National park မှာ ထည့်မယ်ဆိုတာမျိုး ဟာလည်း လုံးဝမဆီလျှော်တဲ့ ဟာပါ။
အခြားအလားတူပုံစံတွေကို ဥပမာဆိုရမယ် ဆိုရင် Tree Forgs လို့ခေါ်တဲ့ မိုးများသစ်တောတွေမှာ နေတတ်တဲ့ သစ်ပင်တတ် ဖားပျံတွေကို သဲကန္တာရမှာ ထားတာမျိုး၊
Horned toads လို့ခေါ်တဲ့ အပူပိုင်း သဲမြေမှာနေတဲ့ ဖားပြုတ်တစ်မျိုးကို မိုးများသစ်တောတွေမှာ ထားတာမျိုး၊
Igloos လို့ခေါ်တဲ့ နှင်းခဲအိမ် သို့မဟုတ် စနိုးအိမ်လေးတွေကို အီကွေတာရပ်ဝန်း ပူနွေးရာသီဥတုလိုနေရာမျိုးမှာ ဆောက်တာမျိုး၊
မြက်ခင်းတွေမှာ ဆောက်လုပ်တတ်တဲ့ Grass huts မြက်ခင်းတဲလေးတွေကို ၀င်ရိုးစွန်းဒေသမျိုးမှာ ဆောက်တာမျိုး၊
အစရှိတဲ့ အရာတွေဟာ အတော်လေးမဆီမလျှော် ပြုလုပ်ထားတဲ့ အဖြစ်တွေပါ။
နောက်ထပ် အခြားပြောရအုန်းမယ်ဆိုရင် တယောတွေကို ရော့ခ်တီးဝိုင်းမှာ ဘန့်တွေမှာတွေ့ရခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဂစ်တာကို ဆင်ဖိုနီအော်ချက်စထရာ ၀ိုင်းတွေမှာ တွေ့ရခြင်းဟာ အတော်မဆီလျှော်သလိုတွေပေါ့။
ဒါဟာ သီအိုရီအရ ဗိသုကာပညာမှာ သတိထားသင့်တဲ့ မဆီလျှော်အောင်ဖြစ်တတ်တဲ့ အချက်တွေကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် ပြောပြခြင်းပါ။ တကယ်တော့ နည်းပညာတိုးတတ်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ လူတွေရဲ့ တီထွင်ကြံဆမှုတွေကြောင့် အဲဒီမဆီလျှော်တာတွေကို လှပအောင် သစ်ဆန်းအောင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ တီထွင်ဆန်းသစ်သူတွေရဲ့ အံ့မခန်းပညာစွမ်းတွေနှင့် အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးနိုင်ခြင်းတွေပါ။
တည်ဆောက်မှုတွေမှာ ပတ်ဝန်းကျင့်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်ပဲ ကွဲလွဲခြားနားနေတာဟာ ဘယ်အရာအတွေများဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။
ဆိုရရင် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ (Building Material) ၊ ဆောင်တာပြ ဒီဇိုင်း(functional Design)၊ ဥတုရာသီ (Climate)၊ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် လက္ခဏာ(Topography)၊ လက်ရှိ Themes (Existing themes)တွေနှင့်၊ မြေခင်း Landscape တည်ရှိမှုတွေဟာ အထူးသဖြင့် ကွဲလွဲနိုင်တဲ့ အချက်တွေပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဗိသုကာဆက်စပ်မှုကို စဉ်းစားခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဗိသုကာလက်ရာတို့ Unity ဖြစ်မှုကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ Unity ဆိုတာဟာ အနီးဝန်းကျင်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျပြီး ၊ အသုံးဝင်သော ဆောင်တာဖြစ်စေသည့် ဒီဇိုင်းအဖြစ် ဟာမိုနီဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ဒီဇိုင်းတစ်ခု၊ တည်ဆောက်မှုတစ်ခု ဖန်တီးတော့မယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့တွေ မမေ့မလျော့ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တစ်ခုဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ မိမိဒီဇိုင်းဟာ ဘယ်လို အနေအထားမျိုးနှင့် တည်ရှိနေမလဲဆိုတာ သေချာစဉ်းစားရင်း function and fit ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်စေကြောင်း။
မှတ်ချက် ။ ။ Mood images များရှာပေးတဲ့ MTZO ကြီး ကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…..
အဓိကလမ်းကြောင်းနည်း စီမံချက် အပိုင်း (၁)
Construction Management ဘာသာရပ်မှာ သင်ယူခဲ့ရသော မှတ်စု အချို့အား သူငယ်ချင်းများနှင့် ခုမှ စတင်လေ့လာသော ညီ, ညီမငယ် လေးများအတွက် စုစည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် လုပ်ငန်းကြီး ငယ်မဆို ဆောင်ရွက်ရာ၌ မိမိတို့ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် ဆောင်ရွက်မှုလမ်းကြောင်းကို ချမှတ်ရစမြဲပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ သိသည်ဖြစ်စေ မသိသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့၏ နေ့စဥ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည် စာရွက်ပေါ်၌မဖော်ပြစေကာမူ စီမံချက်များလျာထားပြီး ဖြစ်ကြသည်။ အများနှင့်စုစည်းဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းကြီးများ၌ ဆိုလျှင် မိမိတို့ သွားရမည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု လမ်းကြောင်းကို စီမံချက်ပုံစံဖြစ် အတိအကျ ဖော်ထုတ်ရန်လိုလာသည်။ စီမံချက်ပုံစံများကို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၌ နှောင်းခတ်ကလည်း သုံးခဲ့သည် ခုခတ်လည်း သုံးစဲဖြစ်ပါသည်။ တိုးတက်သောနိုင်ငံများ၌ စီမံချက်ရေးဆွဲသည့်ပုံစံကို သမရိုးကျ နည်းမှ စနှစ်ကျသောနည်းသို့ ဖွဲ့ စည်းဖော်ထုတ်လာသည်။ ထင်ရှားသော စီမံချက်ဆောင်ရွက်နည်းပုံစံသည် အဓိကလမ်းကြောင်းနည်း စီမံချက် ( Programming by Critical Path Method) ဖြစ်ပါသည်။
အဓိကလမ်းကြောင်းနည်းစီမံချက်ကို ၁၉၆၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှစ၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၌ အသုံးပြုလာကြပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆိုင်သော “ဆောက်လုပ်ရေးအဓိက လမ်းကြောင်းနည်း” ပဏာမအဆင့်ကို ဤ Post ဖြင့် စတင်ဖော်ပြပေးပါမည်။
မော်တော်ယာဉ်သည် လမ်းရှိမှ မောင်းနှင်၍ရသည်။ မော်တော်ယာဉ် နှင့် မော်တော်ယာဉ်လမ်းသည် သီးခြားဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုနှစ်ခုတို့သည် အပြန်အလှန် အထောက်အကူ ပြုကြပါသည်။ထို့အတူ အဓိကလမ်းကြောင်းနည်းစီမံချက်ကို မော်တော်ယာဉ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မော်တော်ယာဉ်လမ်းကို တည်ဆောက်ရပေဦးမည်။ မော်တော်ယာဉ်လမ်းနှင့် တူသော အောက်ပါအခြေခံအချက်များကို ပဏာမ ဖော်ထုတ်ရသည်။
(က) လုပ်ငန်းသဘာဝနှင့်အလုပ်ကို နားလည်ရပါမည်။ နားလည်အောင်လေ့လာပါ။
(ခ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုမှု ပုံစံကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ရမည်။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ပုံစံကို စာရွက်ပေါ်၌ ရေးချထားပါ။
(ဂ) ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ( Sequence of Job ) ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ရမည်။ စာရွက်ပေါ်၌ သတ်မှတ်ချက် ရေးချ ဖော်ပြထားပါ။
(ဃ) အလုပ်ယူနစ်နှင့် လုပ်ငန်းယူနစ် ( Unit of Work and Working Unit ) များကို ကြိုတင် သတ်မှတရမည်။ လုပ်ငန်းငယ်တခုစီ အလိုက် ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များကို ရေးသားဖော်ပြထားပါ။
(င) ဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာရှိသော ချုပ်ထိန်းမှုများ ( Likely Constraints) ကိုကြိုတင် သတ်မှတ်ထားရမည်။ သတ်မှတ်ရရှိသည့် ချုတ်ထိန်းမှုများကို စာရွက်ပေါ်၌ ရေးသားဖော်ပြထားပါ။
(စ) သာမန်အခြေ အနေ၌ အလုပ်ယူနစ်တခုစီ၏ ကုန်ကျစားရိတ် များကိုတွက်ချက်ရမည်။ စာရွက်ပေါ်၌ ရေးသားတွက်ချက်ထားပါ။
(ဆ) အချိန် (သို့မဟုတ်) ငွေကြေးအကုန်အကျတို့အနက် မည်သည့်အချက်သည် အဓိကဖြစ်ကြောင်း ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားရမည်။ စာရွက်ပေါ်၌ ရေးသားဖော်ပြထားပါ။
သမရိုးကျနည်းစီမံချက် သည် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် လုပ်ငန်းအခြေအနေကို လေ့လာ၍ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နည်းစနစ်အနေနှင့်ဖော်ပြပါဆိုလျှင် စီမံချက်ရေးဆွဲသူ၏ အဆုံးအဖြတ်ပင်ဖြစ်သည်ဟု ယေဘူယျ အားဖြင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းတခုလုံး၏ အခြေအနေကို ဖော်ပြသည်။ လုပ်ငန်းစိတ်တခုခြင်း၏ အခြေအနေကို ဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးကာလ (Duration) ကိုလျှော့ချလိုလျှင်လည်းကောင်း ဆောက်လုပ်ရေးစရိတ်စက (Cost) ကိုလျှော့ချလိုလျှင်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် အဓိကအကြောင်းအရာ (Critical Condition) များကိုဖော်ပြခြင်း မရှိ။ မျက်စေ့ဖြင့်ကြည့်၍ ပေါ်လွင်နိုင်သည့် အခြေအနေကို ပြသနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရပါမည်။
အဓိကလမ်းကြောင်းနည်းစီမံချက် ပုံစံ၌ အဓိကအကြောင်းအရာ အဓိကအလုပ် ဆောင်ရွက်ရမည့် အဓိကလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်း စသည်တို့ကို သာမန်မျက်စေ့ဖြင့် မြင်နိုင်သည့် အထိ ဖော်ပြသည်။
(က) မူလလျာထားချက် ဆောင်ရွက်ပြီးချက်နှင့် တိုးတက်မှု အခြေအနေ
(ခ) အချိန်ခွဲဝေသုံးဆွဲနိုင်မှု အခြေအနေ
(ဂ) လုပ်အားခွဲဝေသုံးဆွဲနိုင်မှု အခြေအနေ
(င) စက် ယန္တရား အထောက်အကူ ခွဲဝေသုံးစွဲနိုင်မှု အခြေအနေ
စသည်တို့ကို အသေးစိတ် ဖော်ပြသည်။
အဓိကလမ်းကြောင်းနည်းစီမံချက်ကို လုပ်ငန်းခွင်များ၌ အသုံးပြုလိုလျှင် အလေ့အကျင့် အနည်းငယ်လိုသည်။ နောင်တွင် မိမိ၏ ဆန္ဒအတိုင်း စီမံချက်ပုံစံကို အမျိုးမျိုး ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။
နောင်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြမည့် ဤ Post ပါ အချက်အလက်များသည် ပဏာမ အဆင့်၌သာ ရှိပါမည်။ အဓိက အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးပါမည်။ လက်တွေ့အသုံးချမှု အပိုင်းများအတွက် ဆက်လက်လေ့လာရန် လိုသေးကြောင်း ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။
၁၉၅၆ -၅၈ ခုနှစ်များအတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ပရိုဂျက်များ စီမံရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးအတွက် စီမံချက်ပုံစံတချို့ကို စခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်ရေတပ်သည် ပိုလာရစ်ဒုံးပျံ ဆောက်လုပ်ရန် အစီအစဉ် ချမှတ်သည်။ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ယခင်က မရှိဘူးသေးသော စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။ ကံထရိုက်တာအား အစောဆုံး နောက်အကျဆုံးနှင့် ဖြစ်နိုင်ရန် အလားအလာအရှိဆုံး (Optimistic Pessimistic, and Likely Dates) ပြီးစီးမည့် နေ့များကို သတ်မှတ်စေသည်။ ကံထရိုက်တာ၏ တင်ပြချက်ကို သင်္ချာနည်းဖြင့် တွက်ချက်ဆန်းစစ်သည်။ ဤသို့ ဆောင်ရွက်နည်းကို (Program Evaluation and Review Technique -PERT) ဟုခေါ်သည်။ ဤနည်း၌ စရိတ်စကတန်ဖိုးကို အပြောင်းအလဲမရှိ ပုံသေထားသည်။ နောင်တွင် တန်ဖိုးကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားသည့်နည်းကို တီထွင်ပြန်သည်။ ဤဒုတိယ စနစ်ကို (PERTCO PERT with cost) ဟုခေါ်သည်။ လိုအပ်ချက်ကိုသာသိ၍ မသေချာသော ဆောင်ရွက်မှုများ ပါဝင် သည့် လုပ်ငန်းများအတွက် (PERT) နည်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။
အခြားဖြစ်ရပ်တခုမှာ (E.I Du Pont de Nemours Company) သည် အမေရိကန်ပြည်၌ ဓာတုဗေဒ စက်ရုံအများတည်ဆောက်ရန် လုပ်ငန်းရှိသည်။လုပ်ငန်းအားလုံး၌ အချိန်နှင့် စရိတ် (Time and Cost) များကို ကြိုတင် ခန့်မှန်းရန်လိုသည်။ ပရိုဂျက်စီမံရေးနှင့် အချိန်ဇယားကိုက်စနစ် (Project Planning and Schedule – PPS) ကိုတီထွင်သည်။ အချိန်နှင့်စရိတ်စကကို ထည့်သွင်းရာထားသည်။ PERT နည်းထက် ပိုမို ပြည့်စုံလာသည်။ ဤ PPS နည်းကိုပင် တိုးတက် ပြုပြင်လာခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံး၌ အဓိကလမ်းကြောင်းနည်းစီမံချက် (Critical Path Method – CPM) ပေါ်ထွက်လာသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ အသုံးချလာသည်။ လုပ်ငန်းခွင်၌ တွေ့ကြုံရတတ်သည့် အခြေအနေနှင့် အခက်အခဲကို ပေါင်းစပ် ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ပြန်သည်။
(PERT) သို့မဟုတ် အဓိကလမ်းကြောင်းနည်း နှစ်ခုအနက် မည်သည့်နည်းကိုအသုံးပြုသည်ဆိုစေခါမူ မျဉ်းကြောင်းပြပုံစံ (Diagram or Model) ကိုစနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ် ရေးဆွဲရသည်။ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြရသည်။ ပုံတွင် လေ့လာကြည့်ရှုပါ။
မည်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ် ဖြစ်စေခါမူ
– စီမံကိန်းတခုလုံး၏ လုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ စဉ်းစားရာ၌ ဆောင်ရွက်ပုံစနစ်အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာအောင် အလုပ်သမားအင်အား အရွယ်အစားနှင့် အလုပ်ချိန် စသည်တို့ကို ကြိုက်သလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
– ပူးပေါင်းမှု (Combination)တခုသည် စရိတ်စက အချိန် (သို့) နှစ်မျိုးစလုံးကို အဓိကအားဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။
Project တခုကို ကြည့်လျှင် သာမန်အားဖြင့် တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ် တခုတည်းကိုသာ အလေးပေးစဉ်းစားတတ်သည်။ ပရိုဂျက်တန်ဖိုး၌ တိုက်ရိုက် နှင့် သွယ်ဝှိက် ကုန်ကျစရိတ်များ ပါဝင်အောင် ပါဝင်ကြောင်းကို သတိမူရမည်။ ၄င်းတို့သည် အလုပ်ချိန်နင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်လျှက် ရှိသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာသည် အလုပ်သမားနှင့် စက်ယန္တရားများကို အခြားလုပ်ငန်းခွင်သို့ အမြန်ဆုံးပို့ခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချကောင်းလျှော့ချပေမည်။ နေရာတိုင်း၌ မှန်ချင်မှလည်း မှန်ပေမည်။
– အချိန်သည် ပြဿနာမဟုတ်ခဲ့ပါမူ တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ် အနည်းဆုံးဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေလိမ့်မည်။
– စရိတ်သည် ပြဿနာမဟုတ်ခဲ့ပါမူ အချိန်တိုအတွင်း ပြီးစီးစေရန် အလုပ်ကို အမြန်ဆုံးနည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေလိမ့်မည်။
ဤအစွန်းနှစ်ဖက်အကြား၌ အကောင်းဆုံးနည်းကို ရှာကြံရန်မှာ ထပ်တူဖြစ်သော အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုရှိသော လုပ်ငန်းသဘောများကို အသေးစိပ်တခုကို အမြန်ပြီးစီးစေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့လျှင် စရိတ်စက တက်မည်။ အချိန်သက်သာမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုလုပ်ငန်းစိပ်သည် ပရိုဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ အဓိက (Critical) ကျသောလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ လုပ်ငန်းတခု မဖြစ်သ၍ ပရိုဂျက်လုပ်ငန်းတခုလုံး၏ အလုပ်ချိန်ကို လျှော့နည်းစေမည် မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကွင်းဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များမှ အဓိကကျသောလုပ်ငန်းစိပ် ကိုရှာဖွေရန် အရေးကြီး သည်။ အဓိက လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်မိမှသာလျှင် လုပ်ငန်းတခုလုံး၏ အလုပ်ချိန်ကို လျှော့နည်းစေ၍ တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝှိက် ကုန်ကျစရိတ်များ သက်သာစေမည်။
အချိန် စရိတ် ပြဿနာသည် လွယ်ကူသော ကိစ္စတရပ် မဟုတ်ပေ။ တန်ဖိုးအားလုံးသည် အချိန်ကိုလိုက်၍ ပြောင်းလဲသည်။
– လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတခုအတွက် အချိန်အလုံအလောက်ရလျှင် တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ် ကျဆင်းသည်။
– လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတခုအတွက် အချိန်ပိုမိုကုန်သည်နှင့်အမျှ သွယ်ဝှိက်စရိတ်နှင့် ဝန်ဆောင်စရိတ်များ ပိုမိုကုန်ကျမည်။
– အချိန်နှင့် စုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် နှစ်ခုအကြား မျှတသည့် အခြေအနေကိုရှာနိုင်ပါမှ အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရရှိနိုင်ပါမည်။
ပရိုဂျက်စီမံချက် (Project Program) များ ရေးဆွဲရာ၌ အစဉ်အလာအားဖြင့် မိမိ၏အတွေ့အကြုံအရ ဆင်ခြင်သုံးသပ်လျှက် အဖြေရှာ ဆောင်ရွက်တတ်သည်။ စမ်းသပ်၍ တွက်ချက်ရယူကြသည်။တနည်းအားဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးစီမံချက်တခုလုံးသည် ခန့်မှန်းချက်သာဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ အချိန် နှင့် စရိတ် ကို ပူးတွဲ လေ့လာသည့်စနစ် CMP (သို့) PERT ကိုအသုံးပြုလာကြသည်။ လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်း၌ အချိန် နှင့် စရိတ် ကို ပူးတွဲလေ့လာသည့် စနစ်၊ CMP (သို့မဟုတ်) PERT ကိုအသုံးပြုလာကြသည်။ လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်တိုင်းအတွက် အချက်အလက်များဖေါ်ပြသည့် ကွန်ယက်ပုံစံ ( Net-Work Diagram or Model) ဖြင့် စီမံချက်ကို မြင်မြင်ထင်ထင် ဖေါ်ပြသည်။ ပရိုဂျက်ဆောင်ရွက်မှု နည်းစဉ်ကို မြင်နိုင်ရန်မျဉ်းကြောင်းများ ဖြင့် အဆင့်ဆင့် ဆက်သွယ်ဖေါ်ပြသည်။
စီပီအမ် ( CPM ) နည်း၏ အခြေခံအချက်များ
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း စီမံရေးရာကိစ္စ၌ စီပီအမ်နည်းကို၊ အသုံးပြုဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အောက်ပါအဓိက အချက်များကို၊ အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။
(က) ပရိုဂျက်၌ ပါဝင်အစိပ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ ဆောင်ရွက်မှုအတွက်၊ အချိန်နှင့် စရိတ် ကို အတိအကျ တွက်ချက်ရမည်။
(ခ) ပါဝင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစီ၏ “အချိန်နှင့်စရိတ်“ သိရှိရန်အတွက်၊ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများပြုစုသည့်သမရိုးကျ အစဉ်အလာအတိုင်း၊ လုပ်ငန်းစိပ် ( Itemised Bill of Quatity ) များ၏ ပစ္စည်းနှင့် လုပ်အားကို တွက်ချက်ရမည်။ လုပ်ငန်းစိပ်တစ်ခုစီ၏ တိုက်ရိုက် ကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ချက်ရမည်။
(ဂ) လိုအပ်ပါက လုပ်ငန်းစိတ်တစ်ခုစီကို လုပ်ငန်းအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသင့်လျော်သလို ဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်မှုနည်းစဉ်များ ထပ်ဆင့်ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာရမည်။
(ဃ) အထက်ပါခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာသည့်အဆင့်ကို မည်မျှအထိ ဆောင်ရွက်သင့်သည် ဆိုသည့်အချက်မှာ ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း မည့်သည့် အဆင့်အထိ စရိတ်စကကို သိလိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
(င) တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ယူပြီးသောအခါ၊ လုပ်ငန်းစိပ်တစ်ခုစီအတွက် သာမန်အားဖြင့် လိုအပ်သော လုပ်အားချိန်၊စက်ယန္တရားလုပ်အားချိန်တို့ကို သမရိုးကျနည်းစနစ်များအတိုင်း ဆက်လက်တွက်ချက်ရမည်။
(စ) ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း ( Operation ) တစ်ခုစီအတွက်၊ အချိန်စရိတ်များကို တွက်ချက်ရရှိပြီးသောအခါ၊ သာမန်ထက်ထူးခြားသော အခြေအနေများအတွက် ရာထားတွက်ချက်ရန်သည်၊ ခတ်ခဲတော့မည်မဟုတ်ပေ။ ပြောင်းလဲအခြေအနေများကို ရာထားတွက်ချက်၍၊ ရနိုင်ပေပြီ။
– အလုပ်သမား အဆိုင်းခွဲ၍ ဆောင်ရွက်စေလျှင်…
– အလုပ်သမား အရေအတွက် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်စေလျှင်…
– စက်၊ ယနရား၊ ကရိယာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်စေလျှင်…
– လုပ်နည်းလုပ်ဟန် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်စေလျှင်…
– ပရိုဂျက်အတွက် အခြေအမြစ် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်စေလျှင်…
ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာများလေလေ..ဤသို့ပြန်လည်တွက်ချက်ရသည့်အလုပ်သည် ငြီးငွေ့ဘွယ်ရာဖြစ်လေဖြစ်မည်။သို့သော် အတွေ့အကြုံရလာလျှင်၊ လွယ်ကူလာပေမည်။ နောက်ဆုံးတွင် စုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် အသက်သာဆုံးနည်းကို တွေ့ရမည်။
ဤသို့ နည်းလမ်းရှာဖွေနည်းကို “ ကွန်ယက်စိပ်ဖြာလေ့လာနည်း – Network Analysis “ ဟုခေါ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတိုင်း၊ စီမံကိန်း မန်နေဂျာတိုင်း သိအပ်သည်။ အသုံးပြုအပ်သည်။ ကွန်ယက်စိပ်ဖြာနည်းကို ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ပါက၊ ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်ကို အသေးစိပ် စဉ်းစားနိုင်သည်။ သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
စီ၊ ပီ၊ အမ်၊ နည်း ဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့် ( C P M – Procedures and Terminology )
ပရိုဂျက်လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်၊ ခန့်မှန်းခြေစာရင်း ပြုစုရာ၌ ပီစီအမ်နည်းကို အသုံးပြုလိုလျှင်၊ သဘာဝဆန်သည့် လုပ်နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။သဘာဝကျသည့် နည်းစနစ်ကို စီမံရေးရာပိုင်းနှင့်အချိန်ဇယား စီမံချက်ပိုင်းတို့၌ မလွဲမသွေ အသုံးချရမည်။
– လုပ်ငန်းစီမံရေးရာပိုင်း၌၊ ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများ၊ ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့် တန်းစီရာထားချက်များ စသည်တို့ကို ရွေးချယ်ရမည်။
– အချိန်ဇယားစီမံချက်ပိုင်း၌၊ ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်အတွက် လိုအပ်ချိန်၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး ပြီးစီးသည်အထိ လိုအပ်ချိန်တို့ကို ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ရမည်။
ဤလုပ်ငန်းကို စာရွက်ပေါ်၌ ကွန်ယက်ပုံစံ ( Network Diagram ) ဖြင့် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
ပရိုဂျက်၏ အလုပ်ခွဲခြမ်း စိပ်ဖြာခြင်း
လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျှင် ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်မှုနည်းစဉ်ကို အသေးစိပ် ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာရပေမည်။ စိပ်ဖြာမှုအဆင့်ဆင့်ကို အောက်ပါတို့ဖြင့် ထိန်းကွပ်ထားသည်။
– အလုပ်၏ လုပ်ငန်းသဘော နှင့် သဘာဝ
– အလုပ်သမား အမျိုးအစား နှင့် အရည်အချင်း
– လုပ်ငန်းအတွင်း အလုပ်တည်နေရာ
– လုပ်ငန်းစိပ်တစ်ခုအတွက် ပစ္စည်း နှင့် စရိတ်
– လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ရှေ့နောက်တန်းစီ အခြေအနေ
လုပ်ရပ် ( Activity ) သီးခြားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခု ကိုခေါ်သည်။
ဖြစ်ရပ် ( Event ) သီးခြားလုပ်ရပ်ပြီးဆုံးတိုင်း ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကိုရသည်။
ထို့ကြောင့် လုပ်ရပ်တိုင်း၌ အချိန်ပါဝင်သည်။ ဖြစ်ရပ်၌ အချိန်ပါဝင်ခြင်း မရှိ။ ဖြစ်ရပ်များသည် လုပ်ရပ်များဖြင့် ပိုင်းခြား ဆက်သွယ်ထားသည်။
လုပ်ရပ် ( Activities ) များကို အသေးစိတ်စာရင်း ပြုစုပြီးသောအခါ အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုကို ဆက်လက်လေ့လာရပါမည်။
လုပ်ရပ်တစ်ခုတိုင်းသို့ အောက်ပါမေးခွန်းများ မေးရပါမည်။
(က) ဤလုပ်ရပ်မတိုင်မီ မည်သည့်လုပ်ရပ်ကို လုပ်ရမည်နည်း။
(ခ) ဤလုပ်ရပ်ပြီးလျှင် မည်သည့်လုပ်ရပ်ကို ဆက်လုပ်ရမည်နည်း။
(ဂ) ဤလုပ်ရပ်နှင့်အတူ မည်သည့်လုပ်ရပ်များကို တပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
ဤသို့ စစ်ဆေးစူးစမ်းရင်းဖြင့် လုပ်ရပ်များကို ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်အတိုင်း ရှေ့နောက် တန်းစီပြီး ဖြစ်လာပေမည်။
သို့ ဖြင့် …….
– လုပ်ရပ်တိုင်း၏ အစဖြစ်ရပ်ကို တွေ့ရမည်။
– ဖြစ်ရပ်သည် ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်တစ်ခု၏ အစ (သို့) အဆုံးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရမည်။
– လုပ်ရပ်တစ်ခု၏ အဆုံးသည် နောက်လုပ်ရပ်တစ်ခု၏ အစဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြပေမည်။
– လုပ်ရပ်များ ထပ်နေမှုရှိလျှင် ညွှန်ပြပေမည်။
လုပ်ရပ်အများကို တကြိမ်တည်း တပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်နိုင်စေကာမူ အဆင့်ဆင့်ရှေ့နောက်တန်းစီ ဆောင် ရွက်နိုင်ရန် ၊ အချို့လုပ်ငန်းများကို ချုပ်ထိန်း ( constraint ) ထားရသည်။ ပုံစံအားဖြင့်- ကွန်ကရစ်ပုံစံခွက် မပြုလုပ်ရသေးမှီ ၊ ကွန်ကရစ်ကို မလောင်းနိုင်။ အမိုး – ဒိုင်း မတင်ရသေးမှီ အမိုးပြား အမိုးနိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဤချုပ်ထိန်းမှုမျိုးကို ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချုပ်ထိန်းမှု့ ( Physical Constraints ) ဟု ခေါ်သည်။
တပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သော လုပ်ရပ်အချို့ကို ရှေ့နောက်ခွဲခြား ဆောင်ရွက်စေရသည်လည်းရှိသည်။ ပုံစံအားဖြင့် အပေါ်ပိုင်း၌ အမိုး- ဒိုင်း စသည့် သစ်သားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ၊ အောက်တည့်တည့်ရှိကြမ်းခင်း ( ကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် သစ်သား ) လုပ်ငန်းးကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ရှေ့နောက်ခွဲလိုက်ရသည့် ၊ လုပ်ရပ်များရှိသည်။ ဤသို့ချုပ်ထိန်းမှုမျိုးအစားကို အန္တရာယ်ကင်းချုပ်ထိန်းမှု ( Safety Constructions ) ဟုခေါ်သည်။
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု့အတွက် လိုအပ်သော လူ၊ ပစ္စည်း၊ စက်ယန္တရားများ အချိန်မှီမရရှိနိုင်သည့် အခြေနေမျိုး တွေ့ရတတ်သည်။ ထိုအခါ လုပ်ရပ်တစ်ခုကို ချုပ်ထိန်းထားရသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ပြိုင်တူလုပ်နိုင်သောအခြားလုပ်ငန်းများကို ဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ ဆောင်ရွက်မှုအတွက်လိုအပ်သော အခြေအမြစ် ( Resources ) များ နှောင့်နှေးမှုကြောင့် လုပ်ရပ်တစ်ခုကို ၊ ချုပ်ထိန်းထားရလျှင် အခြေအမြစ်ချုပ်ထိန်းမှု့ ( Resources Constructions ) ဟု ခေါ်သည်။
အချို့လုပ်ငန်းများ ၌ ကျွမ်းကျင်သူအလုပ်သမား ရရှိမှု့ခက်ခဲတတ်သည်။ လုံးဝမရခြင်းအနည်းငယ်သာရရှိခြင်းမျိုးရှိတတ်သည်။ ဤအခြေနေမျိုး၌ တပြိုင်နက်လုပ်နိုင်သော လုပ်ရပ်များကို ဆိုင်းငံ့ထားရသည်လည်းရှိသည်။ ကျွမ်းကျင်သူအလုပ်သမား အခက်အခဲကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာတတ်သော လုပ်ရပ်ချုပ်ထိန်းမှု့များကို အလုပ်သမားချုပ်ထိန်းမှု့ ( Crew Constraints ) ဟုခေါ်သည်။
လုပ်ငန်းအချို့တွင် အခြေနေအရ မန်နေဂျာများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ချုပ်ထိန်းမှု့မျိုးရှိသည်။ သီခြားရှိ ၍ တပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို ရှေ့နောက်တန်းစီဆောင်ရွက်နိုင်စေသည်။ တခါတရံသီးခြားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်လုပ်ရပ်များကိုပင် အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်စေသည် ၊ စသည့် ဆောင်ရွက်ရမှု့မျိုးရှိသည်။ ယင်းချုပ်ထိန်းမှုအမျိုးအစားကို စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ချုပ်ထိန်းမှု့ (Management Constraints ) ဟု ခေါ်သည်။
ကွန်ယက်ပုံစံ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း ၊ ပြုပြင်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်ရာ ၌ အောက်ပါတို့ကို မလွှဲမသွေထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ထိန်းမှုများ … Physical
အန္တရာယ်ကင်းချုပ်ထိန်းမှုများ … Safety
အခြေအမြစ်ချုပ်ထိန်းမှုများ … Resources
အလုပ်သမားချုပ်ထိန်းမှုများ … Crewments
စက်ယန္တရား ချုပ်ထိန်းမှုများ … Equipments
ဘဏ္ဍာရေး ချုပ်ထိန်းမှုများ … Finance
စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ချုပ်ထိန်းမှုများ … Management
ကွန်ယက်ပုံစံနှင့် စံပြပုံစံ (Net-Work Diagram of Model)
နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက် တစ်ခုအတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်ရပ်များ၏ ဆက်သွယ်မှုနှင့် ရှေ့နောက်အစဉ်အတိအကျကို ဖော်လျက် လုပ်ငန်းစီမံချက်၊ စီမံရေးကို ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လွင်စေသည့် မျဉ်းကြောင်းပြပုံစံကို ကွန်ယက်ပုံစံသို့မဟုတ် စံပြပုံစံဟုခေါ်သည်။
လုပ်ရပ်ကို အခြေခံသော ကွန်ယက်ပုံစံ ၌ မျှားတစ်ကြောင်းစီသည် လုပ်ရပ်တစ်ခုစီကို ညွှန်ပြသည်။ မျှားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်သွယ်မှုသည် လုပ်ရပ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်သွယ်မှုကို ညွှန်ပြသည်။
မျှားနှစ်ခုအကြား စက်ဝိုင်း (Node) တစ်ခုစီသည် ဖြစ်ရပ်ကို ညွှန်ပြသည်။
မျှားတစ်ခု၏ အတိုအရှည်သည် အဓိ ပ္ပါယ်သက်ဝင်မှုမရှိပေ။
မျှားဦးတည်ရာဖြစ်ရပ်သို့မဟုတ် လိုအပ်သည့်အချိန်ကို ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီအတွက် သီးခြား – မျှား- တစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြသည်။
စက်ဝိုင်း (Node) တခုအတွင်းသို့ ၀င်လာသော အလုပ်အားလုံး (လုပ်ရပ်အားလုံး) ပြီးစီးမှသာလျှင်၊ စက်ဝိုင်းမှထွက်သော လုပ်ရပ်ကို စတင်နိုင်ကြောင်းညွှန်ပြသည်။
ပုံစံအမှတ် ၌ ဖော်ပြထားသော ကွန်ယက်ပုံစံကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့…
ပုံစံ (က) ၌- A- ကို – B – ၏ရှေ့ ၌လုပ်ရမည်။ B – ကို – C – ၏ရှေ့ ၌လုပ်ရမည်။
ပုံစံ (ခ) ၌- A- ကို – B – နှင့် – C – ၏ရှေ့ ၌လုပ်ရမည်။
ပုံစံ (ဂ) ၌- A- နှင့် – B – ကို – C – ၏ရှေ့ ၌လုပ်ရမည်။
ပုံစံ (ဃ) ၌- A- ကို – C – ၏ရှေ့ ၌လည်းကောင်း – B – ကို – D – ၏ရှေ့ ၌ လည်းကောင်းလုပ်ရမည်။
ပုံစံ (င) ၌ – A- ကို – C – နှင့် – D – ၏ရှေ့ ၌လည်းကောင်း – B – ကို – D – ၏ရှေ့ ၌လည်းကောင်း လုပ်ရမည်။
ဤ သို့ညွှန်ပြနိုင်ရန်အတွက် – A – နှင့် – D – အကြားတွင်သဘာဝကျသော ရှေ့နောက် ဆောင်ရွက်မှုအစဉ်ကို ဖော်ပြသည့် မျှားတု (Dummy Arrow) ကိုထည့်သည်။ မျှားတုအတွက် စရိတ်မလို အချိန်မလို။
ပုံစံ (စ) ၌- A- ကို – B – နှင့် – C – ၏ရှေ့ ၌လုပ်ရမည်။ – B- နှင့် – C – ကို – D – ၏ရှေ့ ၌လုပ်ရမည်။ဤပုံစံ ၌ ဖြစ်ရပ် (events) များကို ခြားနားပေါ်လွင်စေရန်အတွက် မျှားတု (Dummy) ကိုထည့်သည်။
ပုံစံ (ဇ) ၌ ဆောင်ရွက်မှု – -တစ်ခုတည်းကိုပင် ထိန်းချုပ်မှု (Constraints) များနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် လုပ်ရပ်သုံးဆင့် ခွဲလိုက်ရသည်။ မျှားတုကို သုံးရပြန်သည်။
ပုံစံ (ဆ) ၌ – A- ကို – B – နှင့် – C – ၏ရှေ့ ၌လုပ်ရမည်။ – B- ကို – D – နှင့် – E – ၏ရှေ့ ၌လုပ်ရမည်။ – C – ကို – E- ၏ရှေ့ ၌လုပ်ရမည်။ – D – နှင့် – E – ကို – F – ၏ရှေ့ ၌လုပ်ရမည်။
ပုံစံ (ဇ) ၌ – B – ကို – C – ၏ရှေ့ ၌လုပ်ရမည်။ -B-တချို့ကို – A -အချို့ရှေ့ ၌ စတင်လုပ်ရမည်။ သို့သော် -A- မပြီးသေးမီ – D- ကိုစတင်မလုပ်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
ကွန်ရက်ပုံစံ၌ လုပ်ရပ် နှင့် ဖြစ်ရပ် များကို အမှတ်အသားဖြင့် ဖေါ်ပြပါ။ အ၀ိုင်းမျှားအတွင်း နံပါတ်ဖေါ်ပြ၇ာ၌ မျှားထိပ်နံပါတ်သည် မျှားနောက်ပိုင်း နံပါတ်ထက်အစဉ်ကြီး၍ ဖေါ်ပြရသည်။ “လုပ်ငန်းအစ ဖြစ်ရပ်ကို သုည” ဖေါ်ပြ၍ နောင်ရလာသည့် ဖြစ်ရပ်နံပါတ်များကို နံပါတ်စဉ်အတိုင်း ဖေါ်ပြရသည်။
အ၀ိုင်း ( Node ) တစ်ခုသို့ ၀င်လာသည့်မျှားများ ၊ ထွက်သွားသည့်မျှားများအားလုံးသည် အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုရှိရမည်။
အ၀ိုင်းတစ်ခုမှထွက်သွားသော မျှားများအတွက် တူညီသော ရှေ့ပိုင်းဆောင်ရွက်ချက် (Predecessors) များရှိရမည်။
အ၀ိုင်းတစ်ခုသို့ဝင်လာသောမျှားများအတွက် တူညီသော နောက်ပိုင်း ဆောင်ရွက်ချက် ( Indentical Followers ) များရှိရမည်။
လုပ်ရပ်များသည် ဖြစ်ရပ် ( အ၀ိုင်းနံပါတ် ) တစ်ခုအတွက် စုပေါင်းဦးတည်ချက်ရှိရမည်။ ထို့ကြောင့် ဆောင်ရွက်မှုအစ ( မျှားနောက် ) နံပါတ်သည် ၊ အဆုံး ( မျှားဦး ) နံပါတ်ထက်စဉ် ငယ်ရမည်။
စီပီအမ် ( CPM ) နည်း သည် ၊ လှုပ်ရှားမှုအားလုံးအတွက် ၊ ရှေ့နောက်တန်းစီခြင်း ၊ ဆက်သွယ်မှုဖေါ်ပြခြင်းတို့သာလျှင် မဟုတ်ပေ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ရပ်အားလုံးအတွက် အချိန်နှင့်စရိတ်ကိုပါ အကြိုးဝင်ဖေါ်ပြသည်။
ပထမဆင့်၌ လုပ်ရပ်တစ်ခုတိုင်းအတွက် ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်၊ ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ရှေ့နောက်အဆင့်ဆင့် လုပ်ရမည့်အချက်များကို ဖေါ်ပြရန် ကွန်ယက်ပုံစံကို၊ အကြမ်းရေးဆွဲသည်။
ဒုတိယဆင့်၌ လုပ်ရပ်တခုတိုင်းအတွက် လိုအပ်အချိန်ကို ထည့်သွင်းရေးသားသည်။
ဤသို့ဖြင့် ကွန်ယက်ပုံစံသည်၊ ပရိုဂျက်လုပ်ငန်းတခုအတွက်လိုအပ်သော ဆက်သွယ်လုပ်ရပ်များ၊ ဖြစ်ရပ်များနှင့် လုပ်ငန်းတခုလုံးပြီးစီးသည့်အထိ ၊လိုအပ်အချိန်ကို စုပေါင်းဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။
ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ရပ်တခုတိုင်းအတွက် အချိုးကျစရိတ်စကများ ပါဝင်စေသည်။ ဤစရိတ်စကသည် လုပ်ရပ်တခုပြီစီးစေရန် လိုအပ်သည့် သတ်မှတ်အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားအတွက်သာ မှန်ကန်သည်။ အချိန်ပြောင်းလဲချက်ရှိလျှင်၊ စရိတ်စကလည်းပြောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဆက်သွယ်ပေါ်ပေါက်လာမည့် စရိတ်စကပြောင်းလဲမှုကိုလည်း သိရန်လိုအပ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အကျိုးတရား တနည်းအားဖြင့် အသုံးချကိန်း ( Utility Data ) ကို လုပ်ရပ်တခုစီအတွက် ကွန်ယက်ပုံစံ ၌ ဖေါ်ပြနိုင်သည်။
ကွန်ယက်ပုံစံတခုအပေါ် ၌ အချိန်နှင့်စရိတ်ကိန်းဂဏန်းများ ဖေါ်ပြပြီးသောခါ၊ ကွန်ယက်စံပြပုံစံ (Net-Work Model) ဖြစ်လာသည်။
ကွဲပြားခြားနားမှု (Contrast )
September 21, 2010 by MMO
အဖြူတွေကြားမှ အနက်တစ်စက်သည်လည်းကောင်း၊ အနက်တွေကြားမှ အဖြူတစ်စက်သည်လည်းကောင်း၊ သိုးဖြူအုပ်ကြားမှာ သိုးမည်းတစ်ကောင်ပါလာခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ သိုးမည်းအုပ်ကြားမှသိုးဖြူ တစ်ကောင်သည်ပါလာခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ အများနှင့်မတူ တမူထူးခြားနေခြင်း၏ ထင်ရှားသိသာစေသော၊ အမြင်အာရုံကိုဂရုပြုမိစေနိုင်သော Contrast ၏ ဥပမာ သဘောတရားများပင်ဖြစ်သည်။ ဗိသုကာပညာရပ်၌ Contrast (ကွဲပြားခြားနားမှု)ကို အထူးဂရုပြုစေလိုတဲ့ နေရာတွေမှာ တနည်းပြောရရင် အခြားအရာတွေထက် သိသာထင်ရှားစေလိုတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။ ဗိသုကာအများစုဟာ Contrast ရဲ့သဘောကို Entry (၀င်ပေါက်)များ၊ Exit (ထွက်ပေါက်)များ ၊ သီးခြားအခန်းများ သို့မဟုတ် တစုံတရာ အရေးကြီးသော အရာတို့ကို သိသာထင်ရှားအောင် ပြသလိုသောအခါမှာ အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့ ဗိသုကာပညာရှင်ကြီး Frank Lloyd Wright ကို California ပြည်နယ် San Francisco မြို့မှာရှိတဲ့ Morris Shop ငယ်လေးကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဖို့ အပ်နှံခြင်းခံရပါတယ်။ သူ့ကို Shop ငယ်လေးတည်ဆောက်မယ့် နေရာ Location ပြတယ်။ နောက် လမ်းအထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ အခြားစတိုးဆိုင်ကြီးတွေနှင့် အခြားထူးခြားတဲ့ အရာတွေကို ထပ်ပြပေးပါတယ်။ အဲဒီမှာ Frank Lloyd Wright ပြဿနာက Morris Shop ငယ်လေးကို လူတွေ သတိထားမိစေဖို့ စဉ်းစားရမယ့်အချက်ပါ။ လမ်းဘေးဘယ်ညာ အထက်အောက်တွေမှာက နီယွန်မီးလုံးတွေ၊ ဆိုင်းဘုတ်အကြီးစားတွေနှင့် ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်တွေက ဖြတ်သွားသမျှလူတွေကို လာပါကြည့်ပါလို့ အော်ဟစ်ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ ပုံမျိုးချည်းပါပဲ။ အဲဒီမှာ Wright စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်တာက Contrast (ကွဲပြားခြားနားမှု) ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူဟာ ဆူညံနေတဲ့ ဆိုင်တန်းတွေကြားထဲမှာ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်တဲ့ ဆိုင်လေးအဖြစ်ဖန်တီးပြစ်လိုက်တာပါပဲ။
အထက်ပါပုံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အခြားဆိုင်တွေနှင့် ဘာတွေ ကွာခြားသလဲ။ ကြီးမားတဲ့ ၀င်ပေါက်ကြီးကို သတိထားမိပါသလား။ ထင်ရှားကြီးမားတဲ့ Sign တွေမရှိ။ နောက် အရောင်းပစ္စည်းတွေ အပြည့်ပြထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေ မရှိ။ တစ်ခုတည်းသော စွဲဆောင်ရာအဖြစ် ရှေ့က၀င်ပေါက်ကြီးသာ သိသာနေပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေဟာ Contrast (ကွဲပြားခြားနားခြင်း)ကို လက်တွေ့ အသုံးပြုထားမှုပါပဲ။အဲဒီလိုပြုလုပ်လိုက်ပြီး အခြားဆိုင်တွေထက် သိသာထင်ရှားစေချင်တဲ့ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအနားကို ရောက်လာတဲ့ လူတိုင်းဟာ အခြားဆူညံနေတဲ့ အဆောက်အအုံမြင်ကွင်းတွေကို သတိမပြုမိဘဲ ရိုးရှင်းပြီး ငြိမ်သက်တဲ့ အဲဒီဆိုင်လေးကို ပိုပြီး သတိပြုမိစေပါတယ်။ ဒါဟာ နာမည်ကျော် ဗိသုကာကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ Contrast ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ ဂန္တ၀င် ဗိသုကာလက်ရာ တစ်ခုလို့ဆိုရင် မမှားနိုင်ပါဘူး။
ပန်းချီအနုပညာရှင်တွေဟာ အထူးဂရုပြုစေချင်တဲ့ ဧရိယာအကြောင်းပြောကြမယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားမှုရဲ့ ဗဟိုချက်တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် ဆုံချက် တစ်ခု အကြောင်း လိုပဲ အရေးထားပြောကြပါတယ်။
ဗဟိုကျနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ အများသတိပြုစေလိုတာမျိုး ဖန်တီးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ Contrast ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ အင်မတန်ကို အကျိုးသတ်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
Contrast ကိုအသုံးပြုခြင်းမှာ အထူးသတိထားရမယ့်အချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Too much contrast may destory the harmony and unity. ပါတဲ့။
အမှန်တကယ်ဆိုရလျှင် ကျနော်တို့ ဖော်ပြလိုတဲ့ အရာဟာ တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေကြားမှာ တမူကွဲထွက်ပြီး ထီးထီးထင်းထင်းကြီး ပေါ်လွင်နေသည်မှာ Contrast ဟုပြောနိုင်ပါသော်လည်း ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက် အနေဖြင့် ထင်ရှားသိသာကွဲပြားစေရုံသာမက လူအများကိုပါ ရသတစ်ခုခုဖြင့် စိတ်ဝယ်စားဖွယ်ဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်နေစေဖို့လည်း လိုအပ်ပါသည်။ သီအိုရီသည် သီအိုရီသာဖြစ်သည်။ တကယ်လုပ်ဆောင်ချိန်၌ ဒီဇိုင်နာ၏ အတွေး၊ အသိ၊ စိတ်ကူး ၀ိဥာဉ်တို့ ကျက်စားဖြန့်ကျက်မှုဖြင့်သာ အခြေခံ သဘောတရားများဖြစ်သော alike and different, order, basic geometry shapes, edges, comparing, environment, repetition, unity, balance, pattern, rhythm, harmony, composition အစရှိတဲ့ အချက်တွေကို အလိုက်သင့် အလျားသင့် ညီညွတ်မျှတအောင် စီစဉ်နိုင်မှသာ အကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဟု ထင်မြင်မိပါကြောင်း။ အချုပ်အားဖြင့် ကျနော်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အရာဝတ္ထုများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ သဘာဝအတိုင်း တည်ရှိနေသော တော၊ တောင်၊ ရေ၊ မြေ များမှ Contrast ဖြစ်နေသော အချက်များကို လေ့လာစူးစမ်းရင်း Contrast သဘောတရားကို ပိုမိုနားလည်နိုင်အောင် လေ့လာနိုင်ကြပါစေ။
September 16, 2010 by MMO
အခုတလော ကျနော်စာမရေးဖြစ်တာ အတော်ကြာပါပီ…။ သိုင်းလောကထဲဝင်ပြီး စိန်ခေါ်သံနွှဲလိုက်၊ နဂါးနိုင်ဓါးလုလိုက် လုပ်နေခဲ့တာပါ..။ နောက် မထူးပါဘူးဆိုပြီး မိုက်လက်စနဲ့ ဖေ့စဘွတ်က မာဖီးယားဂိုဏ်းထဲဝင်ပြီး Job တွေလုပ်၊ Robbing တွေလုပ်ရင်း မာဖီးယားဂိုဏ်းမှာလည်း အတော်အတန်နေရာ ရလာခဲ့ပါပြီ…။ အဲဒီလိုအလုပ်တွေများနေတော့ ဖိုရမ်လေးကို ပြန်မကြည့်ဘဲ ပစ်ထားခဲ့တာ အတော်ကြာနေပါပြီ…။ ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲ ပစ်ထားသလားမှတ်တယ်….။ ညီအကိုမောင်နှစ်မတွေကလည်း စိတ်ချရတယ်ဗျာ…။ တစ်ပို့စ်မှ တတ်မလာကြဘူး…။ အင်း ဒီပုံအတိုင်းဆို တို့ဖိုရမ်လေးတော့ ဟန်ချက်ပျက်တော့မယ်တိုတာ တွေးမိတယ်..။ ဘာလိုလိုနှင့် ဖိုရမ်လည်း တစ်နှစ်ပြည့်ခါနီးလာပါပြီ…။ ကျနော် စလုံးရောက်တာ အခုဆို တစ်နှစ်ပြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့…။
ကိုယ်တွေ အကြောင်းကိုလည်း တွေးမိသွားတယ်။ လုပ်စမှာတော့ အားလုံးတက်တက်ကြွကြွပဲ။ ပို့စ်တွေ သူတင်လိုက်၊ ငါတင်လိုက်… အမယ် လန်ထွက်နေအောင် စိတ်ဓါတ်တွေမြူးနေလိုက်ကြတာ။ အတွေးတွေ ပလူပျံနေလိုက်ကြတာ…။ စိတ်ဆိုတာလည်း ခက်သားလား အစမှာတော့ ဟုတ်သလိုလိုနဲ့နောက်တော့လည်း ကျနော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကောက်ရိုးမီးလိုဖြစ်သွားကြတာပါ…။ ကိုယ်အပါအ၀င်ပါလေ..။ ကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာဆိုတော့ မြန်မာစိတ်ဓါတ်အပြည့်အ၀ရှိတာပေါ့…။ ကိစ္စတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လွယ်ကူပေမယ့် အဲဒါကို တည်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်…။ ပါဝင်တဲ့သူတွေ စိတ်ဓါတ်တွေ ညီညတ်မှသာဖြစ်နိုင်တာပါ…။ အထူးသဖြင့် အများနဲ့လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေမှာပိုဆိုးပါတယ်…။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆန်းစစ်တော့လည်း စိတ်ဓါတ်ပြည့်ဝမှု အတော်လိုအပ်နေသေးတာ တွေ့ပြန်ရော…။ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုဆို ဝေလာဝေးဖြစ်နေရော…။
စိတ်တွေ ရှုပ်ထွေးပြီး အတွေးတွေ ပွားနေမိတယ်….။ စိတ်ထဲမှာ မကောင်းတာတွေ၊ အပျက်ဘက်တွေပဲ တွေးနေမိတော့တယ်…။ ဒီမှာ စိတ်ထဲကပေါ်လာတာက Balance ဟန်ချက် ဆိုတာလေးပဲ။ Architectural Elementary တွေရေးဖြစ်နေတာ အတော်ကြာပါပြီ။ ခုဟန်ချက် Balance ဆိုတာလေးအကြောင်းရေးဖို့ ဟန်ပြင်ရင်း စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ ကိုယ်တွေရဲ့ ဟန်ချက်ပျက်နေမှု။ နောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ အဆိုးမြင် ဟန်ချက်တွေ အလေးသာနေမှုကို စိတ်ထဲမှာ တွေးဆလိုက်မိတယ်…။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမရေးရေး၊ ဘယ်သူမလုပ်လုပ် အဓိက ငါလုပ်နေဖို့ပဲ လိုတာမဟုတ်လား ဆိုတဲ့အတွေးလည်းခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်…။ ကိုယ်ရဲ့ အလေလိုက်တဲ့ဘက် အလေးသာနေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟန်ချက်တွေလည်း ဖိုရမ်မှာ ပြန်ပြီး ချိန်ညှို့ထည့်ပေးရအုန်းမှာပေါ့…။
ဟန်ချက်အကြောင်းပြောဖို့ စဉ်းစားမိတော့ ဆပ်ကပ်တွေက ကြိုးတန်းလျှောက်သမားတွေကို ပြေးမြင်မိတယ်…။ ကြိုးတန်းတစ်ခုပေါ်မှာ မယိမ်းယိုင်အောင် လျှောက်လှမ်းဖို့ လက်တွေဘယ်ညာယိမ်းပြီးထိန်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ တုတ်တံတစ်ချောင်းကိုကိုင်ပြီး ဘယ်ညာညီအောင်၊ ဟန်ချက်မပျက်အောင် ထိန်းတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်တတ်ကြတယ်..။ အဲလိုလုပ်နိုင်မှသာ ပြုတ်ကျမှုမဖြစ်နိုင်မှာပါ..။ စက်ဘီးစီးတာ လူတွေရဲ့ လမ်းလျှောက်တာ ပြောရရင် လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ အရာရာတိုင်းမှာ ဟန်ချက် Balance တွေ ထိန်းညှိုထားတာမဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် balance ဆိုတာ နေရာတိုင်းအတွက် အင်မတန်အရေးပါတဲ့ အရာပါ…။ ဗုဒ္ဒရဲ့ မစ္ဇျိမပဋိပဓါဆိုတာ ဘယ်အရာမှ အစွန်းမရောက်ဖို့ အရာရာ Balance ဖြစ်အောင်သတိနဲ့နေဖို့ သင်ကြားခြင်းပဲမဟုတ်ပါလား…။ ဒီတော့ Balance ရဲ့အရေးပါမှုဟာ ဘယ်လောက်အထိ နက်နဲသလဲ သိသင့်သလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်လောက်မှာပါ..။
ဗိသုကာပညာမှာလည်း Balance ရဲ့အရေးပါမှုဟာ အထူးပြောဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး..။ အဆောက်အအုံတွေ၊ ဘလောတွေကို အခြားအရာတွေနှင့် Balance ဖြစ်အောင် ချိန်ညှိုပုံအမျိုးမျိုးနဲ့ အမြင်မှာ ဟန်ချက်ညီအောင် အစီအစဉ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗိသုကာတွေဟာ သူတို့ဒီဇိုင်းတွေမှာရှိတဲ့ Balanceကို စဉ်းစားတဲ့အခါ အရင်ဆုံး Symmetric (ခေါက်ချိုးညီခြင်း) နှင့် Asymmetric (ခေါက်ချိုးမညီခြင်း) ဘယ်ဟာကိုသုံးမလဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ငယ်စဉ်ပညာသင်ကြားချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကစားချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် Symmetric နှင့် Asymmetric ကို အလိုလို ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ နောက်မှသာ ပိုမိုအဆင့်မြင့်တဲ့ balance အကြောင်းတွေကို ရှင်းလင်းသေခြာ နားလည်နိုင်အောင် လေ့လာသင်ကြားကြရတာပါ။ အဲဒီတော့ ဗိသုကာတွေဟာ သဘာဝအားဖြင့် Symmetrical Design တွေကို သင်ယူပြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်…။ Balance ကို ပန်းချီပညာရှင်တွေကတော့ Asymmetrical Balance ကို Informal လို့ခေါ်ဆိုကြပြီး Symmetrical Balance ကို Formal လို့ အမျိုးအစားခွဲ ခေါ်ဆိုတတ်ကြပါတယ်။
ဒီ Balance Concept ကို လက်တွေ့ရှင်းလင်း ပြောပြရာမှာ Balance Scale က အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင်နားလယ်လွယ် ပါတယ်။ ပုံမှာ ပြထားသလို သစ်သားချောင်းကလေးနှင့် တြီဂံတုံးလေးတစ်တုံး တို့ဖြင့် ပြသနိုင်ပါတယ်။ သစ်သားချောင်းအလယ်မှာ ပုံမှာပြထားသလို အချိုင့်ကလေး ပြုလုပ်ပေးထားပါ…။ သစ်သားချောင်းလေးအရွယ်အစားကို ၁၂ လက်မ ကနေ ၁၈ လက်မ အတွင်းလောက်ထားပြီး ပြုလုပ်မယ်ဆိုအဆင်ပြေ နိုင်ပါတယ်…။ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၊ အလေးချိန် အမျိုးမျိုး သော သစ်တုံးကလေးတွေ၊ ပစ္စည်းကလေးတွေ ကို တဖက်တချက်စီမှာ ထားပြီး စမ်းသပ်လေ့လာနိုင်ပါပြီ။ အလေးချိန်တူ အရွယ်အစားတူတဲ့ တုံးလေးတွေကို ဘယ်ညာ အကွာညီညီထားခြင်းဟာ Symmetrical Balance သို့မဟုတ် Formal Balance ဆိုတာကို ပြသခြင်းပါ။ နောက်ဆုံးပုံမှာလို အရွယ်မညီ အကွာအဝေးမညီသော်လည်း တဖက်နှင့်တစ်ဖက် အလေးချိန်ညီမျှနေခြင်းဟာ Asymmetrical Balance သို့မဟုတ် Informal Balance ပါပဲ။
အဆောက် အအုံ ဒီဇိုင်းများမှာလည်း အခုလို Balance တွေကို ချိန်ဆ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အခြား Balance နှင့်ပတ်သတ်ပြီး နားလည်အောင် လေ့လာနိုင်တာတွေ များစွာရှိပါတယ်။ ရေကူခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း စတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ မှာလည်း Balance ရဲ့ အခြေခံတွေပါ။ နောက် ခြေတဖတ်တည်း မတ်တပ်ရပ်ခြင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်က မယိုင်မလဲ အောင် ဘယ်လိုတွေ Balance လုပ်ထားသလဲ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ Balance တွေ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ Balance ရဲ့ feeling ခံစားမှုကို ဗိသုကာလက်ရာတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာပါလာတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ပန်းချီကားတွေကနေ တဆင့် အကောင်းဆုံးခံစားလေ့ကျင့် လေ့လာနိုင်ပါတယ်…။
အခုဆိုရင် Balance အကြောင်းကို သဘောပေါက်နားလည်နိုင်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
Balance ဆိုတာကို အခြားနေရာတွေမှာပါ ဖြန့်ကျက်တွေးတော စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးတွေ၊ လှုမှုရေးတွေ၊ စီးပွားရေးတွေမှာ Balance ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်း စသဖြင့်လည်းကောင်း၊ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ ၀င်ငွေထွက်ငွေ Balance ၊ အားကစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ပြိုင်ဘက်အချင်းချင်းရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှု Balance စသည်ဖြင့် လည်းကောင်း အမျိုးမျိုး ချိန်ဆမှန်းဆ၊ တွေးတောရင်းဖြင့် Balanceရဲ့အကြောင်းများများလေး အတွေးပွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောရင်း ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာရေး အတွက် Balance ညီမျှအောင် ဂရုပြု နေထိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ…။
September 4, 2010 by MMO
မဲမှောင်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် စိတ်ထဲမှာ လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုဖြစ်နေသည်။ ကျနော့ ပင်ကိုယ် စိတ်ကပင် အလွမ်းကို အားသန်သည်လားမသိပါ…။ တခုခုအကြောင်းရှာပြီး လွမ်းနေချင်တတ်တာ ၀ါသနာပါနေသည်။ မိုးလေး အုံ့ရင်လွမ်းသည်။ လေပြေလေး တိုက်ရင်လွမ်းသည် သစ်ရွက်ကလေးတွေ လေအဝှေ့လွင့် ၀ဲသွားတာ မြင်ရရင်လည်းလွမ်းတတ်သည်။ ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကလည်း ကန်ရေသောက်၊ မြက်ခြောက်စားလို့ အပြောခံရအောင် ခိုးခိုးခေါင်ခေါင်ရှားပါးဒေသမဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကိုတော့ မမေ့နိုင်တာကတော့ အမှန်ပင်။
စိတ်ထဲမှာ အားရပါးရ လွမ်းနေတုန်း ဖုန်းမြည်သံကြောင့် အတွေးတွေပျောက်သွားပြီး ဖုန်းကိုကိုင်လိုက်တော့ ဘော်ဒါကြီး MTZO ပင်။
“အော်…. တတ်လာခဲ့ဗျာ… ငါးထပ်လေ… ကျနော် အပြင်ကထွက်စောင့်နေမယ်… အိုကေနော်…”
တံခါးသော့ယူလိုက်ပီး အခန်းထဲက ထွက်ကာ အိမ်တံခါးဖွင့်ပြီး MTZOကို စောင့်နေလိုက်သည်။
“အင်းထိုင်အုန်းဗျာ… ကျနော်… အခန်းလေးနည်းနည်းရှင်းလိုက်အုန်းမယ်…”
“မိုးလေးနည်းနည်းအုံ့တော့ စိတ်ထဲ လွမ်းချင်သလိုလိုပဲဗျာ…”
“အဟုတ်ပဲဗျာ…. ကျနော်လည်း အဲလိုဖြစ်နေတာ… ဘာကိုလွမ်းမှန်းမသိလွမ်းနေမိတာဗျ… အဲလိုလွမ်းမိရင် ရှေးကသီချင်းစာသားလေးတွေ စိတ်ထဲသတိရမိ တတ်တယ်ဗျ…”
“ဟုတ်လား လုပ်စမ်းပါအုန်း ဘယ်သီချင်းစာသားများလဲ…”
“အသက်ကလေးရယ် ရှည်စေလို… မြနန္ဒာနေညိုသန်းတယ်… မန်းတောင်ရိပ်ခိုဆိုတဲ့ သီချင်းပဲဗျာ… ကျနော်လည်း တပိုင်းတစပဲရတာဗျ…”
“အင်း… ကျနော်လည်း ကိုယ်မြို့ကိုယ့်ရွာ ကိုလွမ်းတာပဲဗျာ… အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ လင်မယား တပြည်တရွာ လာရှာနေချိန် မိဘတွေနှင့် ကင်းကွာနေတဲ့ ကလေးအတွက်လည်း တခါတခါ စိတ်မအေးရဘူးဗျာ….”
“ဟုတ်တယ် ကိုသန့်ဇင်ရာ… တွေးရင်ဆွေးစရာတွေ အများကြီးပါဗျာ… တတ်နိုင်သမျှတော့ မဆွေးဖြစ် မလွမ်းဖြစ်အောင် နေရတာပဲ…။”
“ဒါနဲ့ ဒီနေ့ ဘယ်သွားစရာရှိသလဲဗျ…”
“ဒါဆိုကျနော်တို့ ဖိုရမ်အတွက် တချို့စာ မပြတ်တာလေး တွေ လုပ်စမ်းပါအုန်းဗျာ…”
“အင်း ဟုတ်တယ်ဗျာ အတော်များများ တိုးလို့တန်းလန်းတွေ ဖြစ်နေတာ များတယ်… ဘယ်အကြောင်းဆက်ရင် အဆင်ပြေမလဲဗျ…”
“ကျနော်ပြန်ကြည့်ထားတာမှာ ဟိုတလောကပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ပြာသာဒ်အကြောင်း သတိရမိတယ်ဗျာ… ပြာသာဒ်ရဲ့ အခေါ်အဝေါ် အစိတ်အပိုင်းတွေ အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတာ အဲဒါ ဘာမှ ဆက်မလာတော့ တိုးလို့တန်းလန်းကြီး အတော်ဆိုးသဗျ….။”
“ ပြာသာဒ်အစိတ်အပိုင်းကို အကြမ်း ၅ ပိုင်းခွဲပြီး ပြောလို့ရတယ်ဗျာ….”
၄။ ဘုံ အဆင့်များနှင့်
၅။ မုခ် ဆိုပြီး အကြမ်းဖျဉ်းခွဲ ထားတယ်ဗျ…”
“ဒါတင်ပဲလားဗျ… ကျနော်တွေ့တာတော့ ရှုပ်ရှပ်ခက်နေတာပဲဗျာ…”
“လာမယ်လေဗျာ လောရန်ကော ကိုယ့်လူရယ်…”
“အပိုင်း ၁ မှာပါတဲ့ ထီးတော် မှာ စိန်ဖူး၊ ငှက်မြတ်နား၊ နှင့် ထီးတော်ရဲ့ ဘုံအဆင်တွေပေါ့… အဲဒါ ထီးမှာ ပါတဲ့ အကြမ်းအစိတ်အပိုင်းတွေ။
အပိုင်း ၂ ထုပိကာ မှာ ငှက်ပျောဖူးပုံ ရှည်မျောမျော ထီးတော်အောက်ခြေကအပိုင်းပဲဗျ…။ ထုပိကာမှာ ကြက်သွန်ခေါင်း၊ ဇိလို့ခေါ်တဲ့ (လည်)၊စတာတွေနှင့် ငှက်ပျောဖူး အောက်ခြေနား ဖောင်းဖုသွားတဲ့ နေရာကို တင်းလို့ခေါ်တယ်…။
အပိုင်း ၃ ကလပ်မှာတော့ ကြာမှောက်၊ကြာလှန်၊ အပေါ်ခလုတ်၊ အောက်ခလုတ်၊ နောက် ရာမလက်ညှိုး ၊ နောက် ကလပ်ပန်းဆွဲ- မုံလာဖတ် စတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါလာတယ်..။
အပိုင်း ၄ ဘုံအဆင့်တွေမှာ ဘုံအဆင့်အဆင့်တွေနှင့် သူနှင့်ဆိုင်တဲ့ ဒုရင်တွေ၊ ထောင့်ပန်းတွေ မုခ်ပန်းတွေပါတယ်ဗျ…။ ဘုံအဆင့်တွေမှာ ခေါင်မိုးတွေကို ရေဆင်းလို့ခေါ်တယ်…။ ခေါင်အုပ်လေးတွေ နေရာမှာ တချို့ ပြာသာဒ်တွေမှာ ကြက်မောက်တန်းလို့ခေါ်တဲ့ ခေါင်အုပ်ကို အလှဆင်ထားတဲ့ ပန်းလေးတွေ တွေ့နိုင်တယ်…။ မုခ်ပန်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ၊ ဒေါင့်ပန်းတွေမှာ ပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အဲဒါတွေကိုလည်း သူ့အစိတ်အပိုင်းအလိုက် အခေါ်တွေရှိသေးတယ်…။
အပိုင်း ၅ မုခ်မှာ အောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုရင် မုခ်ထပ်၊ မုခ်ထွက်- ယွန်ဆက်လို့ ခေါ်တဲ့ မုခ်ပေါက်ကို တန်ဆာဆင်ထားတာတွေ အဆောင်အကူးမှာ တန်ဆာဆင်တာတွေ ရှိသေးတယ်…။
“အင်း အတော် စိတ်ဝင်စားစရာပဲဗျာ… ဒါနဲ့ ပြာသာဒ်လုပ်ရင် သတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေလည်း သိချင်သေးသဗျ၊ နောက် သူ့ရဲ့ အချိုးနှင့် အရွယ်အစားတွေရော ဘယ်လိုပိုင်းသလဲ… အဲဒါတွေလည်း လုပ်စမ်းပါအုန်း…”
“ အင်း… ပြာသာဒ်ပုံစံထုတ်ရင် ပထမဘုံ အဲ Floor Plan ကနေအခြေတည်လာမယ့် ခန်းဖွင့်ကို အခြေခံထားပြီး စဉ်းစားတယ်ဗျ…။ အဲဒါပထမ အချက်။ နောက် ဒုတိယအနေနှင့် ဘုံဘယ်နှဆင့်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ ဘုံဆင့်အရေအတွက်…။ အများအားဖြင့် ဘုံဆင့်တွေကို မြန်မာပြာသာဒ်တွေမှာ မဂဏန်းတွေပဲ ထားတာများတယ်…။ သုံးဘုံကိုအနည်းဆုံးထားပြီး…။ ၃ ၊ ၅ ၊ ၇ ၊ ၉ ၊ ၁၁ ၊ ၁၃ အစဉ်အတိုင်း ထားတတ်ကြတယ်။ ၁၃ ဘုံအထိတော့ အများဆုံးထားတာပဲဗျာ…။ ပြာသာဒ်ကို စုံဂဏန်းမတွေ့ရဘူးလို့ ပြောတယ်ဗျ…။ တတိယ အချက်ကတော့ အတော်လေးအရေးကြီးတယ်…”
“ပြာသာဒ် အတင်း၊ အပျော့ကိုရွေးတာပဲ ၊ အတင်းဆိုတာ အဖြောင့်ပြာသာဒ်ကိုဆိုချင်တာ၊ အပျော့ဆိုတာ ခပ်ကွေးကွေးပြာသာဒ်ပေါ့…။”
“ဘယ်လို… သိပ်မရှင်းဘူးဗျာ… ဘယ်နေရာ ကွေးပြီး ဘယ်နေရာ ဖြောင့်တာလဲ…။”
“ဒီလိုဗျာ ပြာသာဒ်ဘုံ အဆင့်တွေမှာရှိတဲ့ အမိုးစွန်း အချွန်လေးတွေရဲ့ ထိပ်တွေကို မျက်လုံးနှင့် မှန်းပြီး မျဉ်းလေးဆွဲလိုက်ရင် ဖြစ်လာတဲ့ မျဉ်းကြောင်းလေးရဲ့ အကွေး၊ အဖြောင့်ကို ဆိုချင်တာ…။ အဲဒီမျဉ်းလေး ကွေးတယ်ဆိုရင် အပျော့ ပြာသာဒ်၊ အဲဒီမျဉ်းလေး ဖြောင့်နေတယ်ဆိုရင် အတင်းပြာသာဒ်ပေါ့…။ ပုံလေးနှင့် ဆိုရှင်းသွားလိမ့်မယ် ဒီပုံလေးကြည့်လိုက်ဗျာ…။
“အင်း ဒီလိုဆိုတော့ ပိုရှင်းသွားတယ် MMO ရေ… ဒါနဲ့ ဘုံအဆင့်တွေကိုရော ဘယ်လိုပိုင်းသလဲ…”
“ဘုံပိုင်းတာကတော့ ခုနပြောထားတဲ့ Floor Plan ပထမဘုံမှာရှိတဲ့ အခန်းဖွင့် အခန်းအကျယ်… အဲ… တိုင်တွေရဲ့ အလယ်အတိုင်းအတာကို အခြေတည်ရတယ်…။
မြန်မာအခေါ် column တိုင်တွေကို ကွန်းတိုင်လို့ ခေါ်သဗျ…။ အဲဒီ ကွန်းတိုင်တွေနှင့် ခန်းဖွင့် တိုင်းပြီး Eave Line အမိုးစွန်းဘယ်လောက်ထွက်မလဲ ဆိုတာ တွက်ပြီး အဲဒီအမိုးစွန်း ဘယ်ညာနှစ်ဘက်ပါ ပေါင်းထားတဲ့ အလျားကို အခြေခံ အနေနဲ့သုံးတယ်…။ အဲဒီအနားကို L လို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ပြာသာဒ်ရဲ့ အမြင့်ကို ငါးမတ်ချိုး(၁ ၁/၄ ဆ) ၊ တစ်ပြန်ခွဲချိုး (၁ ၁/၂ဆ)၊ မတ်တင်းချိုး (၁ ၃/၄ )၊ နှစ်ပြန်ချိုး (၂ ဆ) ဆိုပြီး အချိုးတွေ သတ်မှတ်ထားကြတယ်…။ ကျနော်ပုံလေးနှင့် ပြလိုက်မယ် ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ဗျာ….။”
“အချိုးအမျိုးမျိုးရှိတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ အဲဒါတွေကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်အချိုးသုံးသလဲ ဆိုတာပြောအုန်းဗျာ…။”
“ငါးမတ်ချိုးနှင့် တစ်ပြန်ခွဲချိုးတွေကို မြေပြင်ကနေ အမြင့်သိပ်မကွာတဲ့ အဆောက်အအုံတွေရဲ့ ထိပ်မှာ ပြာသာဒ်အဖြစ် ဆောက်တတ်ကြတယ်ဗျ…။ ဘုံအမြင့်တွေကတော့ ပြာသာဒ် ခန်းဖွင့်အလိုက် အကြီးအသေးကွာသွားတယ်…။ မြေပြင်ညီ တစ်ထပ် အဆောက်အအုံတွေမှာ အများအားဖြင့် ငါးမတ်ချိုးပဲ သုံးကြတယ်…။ အဲ…ခန်းဖွင့်အရမ်းကြီးလွန်းရင် တစ်ပြန်ခွဲ အချိုးပဲ ထားတတ်ကြတယ်…။ တစ်ပြန်ခွဲပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ ၁၀ပေ ကျော် ပတ်ဝန်းကျင်လောက် မြင့်တဲ့ ကုန်းမြင့်တွေပေါ်မှာ အဆောက်အအုံတည်ထားတာမျိုးဆိုရင် တစ်ပြန်ခွဲကိုပဲ လုပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်…။”
“ဒါဆို မတ်တင်းနှင့် ၂ပြန်အချိုးတွေကို အရမ်းမြင့်တဲ့ အဆောက်အအုံတွေနှင့် တောင်ကုန်းတွေ၊ ကုန်းမြင့်တွေပေါ်မှာ ဆောက်ကြမှာပေါ့”
“ဟုတ်တယ်ဗျ… ကျနော့်အထင် အဲဒါက မျက်စိအမြင် vision အရ အချိုးကို ချိန်လိုက်တယ်ထင်တယ်ဗျာ…။ မန္တလေး နန်းတော်မှာရှိတဲ့ နန်းမြင့် မျှော်စင်လို အဆောက်အအုံတွေဆိုရင် အဲလို အချိုး များများထားပြီး ဆောက်တတ်ကြတယ်…။
“အင်းဗျာ…ရှေးက မြန်မာဗိသုကာကြီးတွေ အမြင်ကို ပသာဒဖြစ်အောင် ပြုရာမှာ အချိုးတွေ လိုသလိုကစားတတ်တဲ့ အသိက အတော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း သလို လေးစားဖို့လည်း ကောင်းတယ်နော်…။ ”
“ဒါပေါ့ ဗျာ… ဒီမှာ အောက်ကနမူနာ ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ဗျာ အဲလိုစီစဉ်တတ်ကြတယ်ဗျ….။”
“ဟုတ်ပါ့ဗျာ အချိုးဆိုတာလည်း သူ့နေရာ နှင့်သူထားတတ်မှဗျ… မဟုတ်ရင် မမြင့်မတင့်တာတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်…။”
“အေးဗျ… တချို့နားမလည်တဲ့သူတွေ ဆောက်ရင် မြေပြင်နိမ့်နိမ့်မှာ ၂ပြန်ချိုးပြာသာဒ်ကိုချိုးပြီး ဆောက်လိုက်လို့ကတော့ ပိန်ပိန်ချွန်ချွန်နှင့် အတော်အကြည့်ရဆိုးမယ်ဗျ… အရမ်းမြင့်တဲ့နေရာတွေမှာ ငါးမတ်ချိုးလောက်သာ ဆောက်ထားရင် ပုအိုက်အိုက်နှင့် အောက်ကနေကြည့်တဲ့သူ အတွက် ကသိကအောက်ဖြစ်နေမှာ သေချာတယ်ဗျ… ပြာသာဒ်ရဲ့ အလှကို အားပါးတရ ခံစားလို့ မရနိုင်တော့ သလိုဖြစ်သွားနိုင်တာကိုး…”
“ဒါတော့ ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာဆိုသလို ဆောက်လုပ်ဖူးတဲ့ ဗိသုကာတွေ အချိုးအစားနားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ အာခီတတ်တွေ ဆောက်လုပ်ကြမယ်ဆို ကောင်းမွန်တဲ့ ပြာသာဒ်တစ်ဆောင်ဖြစ်လာမှာပါဗျာ…”
“အေးဗျာ… ကျနော်တို့တွေလည်း တဖြည်းဖြည်းပဲ လေ့လာဆည်းပူးနေကြရတယ်… ကျနော့စိတ်ထဲ ခုထိဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိမတတ်သေးဘူးထင်နေတယ်ဗျာ… ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးလေ… တကယ်လည်း မတတ်သေးတာပါ….”
“အဲလိုလည်း မဟုတ်သေးဘူးလေ… ခုကျနော့ကိုပြောပြတာတွေဟာ ခင်ဗျား အသိအတတ်တွေပဲပေါ့…”
“အော်ကျနော်ပြောတာလေးတွေက မြန်မာမှု ဗိသုကာပညာရဲ့ မစို့မပို့ အစိတ်အပိုင်းလေးလောက်ပါပဲ… ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ ဆီမှာ နောင်များ ဆည်းပူးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော် ၀မ်းသာအားရ ဆည်းပူးချင်သေးတယ်ဗျာ…”
“အင်း အချိန်တန်လို့ ကျနော်တို့တွေ ပြည်တော် ပြန်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ…”
“ဟုတ်တယ်ဗျာ အဲဒီအချိန်ပဲ ဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ တွေးနေမိတယ်… ကဲကျနော်တို့ တစ်ခုခုစားဖို့ အောက်ဆင်းကြရအောင်ဗျာ”
“ကောင်းပြီဗျာ အောက်နားက KFC ဆိုင်လေးပဲ ပြေးလိုက်ကြရအောင်ဗျိုး..”
August 21, 2010 by MMO
ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုတာ လွယ်မယောင်နှင့်ခက်ပါတယ်….။ ဆီလျှော်အောင်၊သင့်တင့်အောင် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ အပြောလွယ်သလောက် တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး…။
ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဖြစ်စေ စုစုစည်းစည်း ညီညွတ်မျှတအောင်၊ မြင်တဲ့သူ၊ ကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့ အမြင်မှာ ပသာဒဖြစ်နေအောင် စုစည်းနိုင်တယ်ဆိုရင် composition ဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဗိသုကာပညာမှာ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်(shapes)၊ အရောင်(colors)၊ အဆင်အသား(textures)၊ မျဉ်း(lines)၊ သို့မဟုတ် စုစည်းထားသောအရာဝတ္ထု(themes)တွေဟာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တစ်ပိုင်းနှင့်တစ်ပိုင်း ဆက်စပ်ထားခြင်းကို composition လုပ်ခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အလွန်နက်ရှိုင်းလှတဲ့ ချိုင့်ဝှမ်း သို့မဟုတ် ချောက်ကမ်းပါးတစ်ခုကို ဖြတ်ပြီး လမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ချောက်ရဲ့ ဟိုဘက်ဒီဘက် ကမ်းပါး နှစ်ဘက်ကို ဆက်သွယ်ပေးဖို့ တစ်စုံတစ်ခု လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ အရာကို ကျနော်တို့တွေ ဘယ်လိုများခေါ်ပါလိမ့်..။ တံတား (Bridge) ဆိုတာကို လူတိုင်းသိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
တံတားဆိုတာမှာရော ဘယ်လိုတံတားတွေများရှိနိုင်မလဲ။ ဘယ်လိုအရာဝတ္ထုတွေနှင့် တည်ဆောက်ထားမလဲ။ သံတံတား၊ သစ်သားတံတား၊ ကြိုးတံတား စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်မှာပါ။
နောက် ဆက်စပ်မှုအနေနှင့် ကျနော်တို့ လူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေရော စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။ ကျနော်တို့တွေမှာ မွေးချင်းညီအကိုမောင်နှမ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိကြပါသလဲ။
အဲဒီညီအကိုမောင်နှမတွေကရော ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်နေကြပါသလဲ။ နောက် အဲဒီ မိသားစုတစ်ခုမှာရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာ အတော်တော်များများ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဟာ ဆင်တူနေတဲ့ အချက်ကလေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါမျိုးလေးတွေကို သတိထားမိကြပါသလား။
ကျနော်တို့တွေ Design တွေပြုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ရော….
တခါတရံမှာ ကျနော်တို့တွေရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေမှာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်နိုင်ဖို့ တံတားသဖွယ် သို့မဟုတ် ဆီလျှော်သင့်တင့်တဲ့ အကူးအပြောင်း ဖြစ်စေအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပုံသဏ္ဍာန်နှစ်ခုဟာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သီးသန့်စီ၊သီးခြားစီ ဖြစ်နေတာ တွေ့မှာပါ။ အဲဒီနှစ်ခုဟာ ဆက်စပ်မှုလုံးဝမရှိသလိုလည်းခံစားရမှာပါ။ အကယ်၍ အဲဒီနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်မှုအနေနဲ့ မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်
တစ်ခုခုနှင့် ဆက်စပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ ခံစားရမှာပါ။ အဲဒီတော့ အဲဒီနှစ်ခုကို ဆက်စပ်ပေးဖို့ဆိုရင် ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မလဲ…။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ ဆက်စပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို့နှစ်ခုရဲ့
သီးခြားဖြစ်နေမှု အထီးကျန်သလိုဖြစ်နေမှုတွေကနေ စုစည်းမှုဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်မလဲ။ ဘယ်လို လုပ်ပေးရင် သူတို့တွေရဲ့ ဆက်သွယ်နေမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြနိုင်မလဲ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ တူညီတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်(shapes)၊ မျဉ်း(lines)၊ အရောင်(colors) စတဲ့ အရာတွေနှင့ ဆက်စပ်ပေးရမှာပါ။
အပေါ်ကပုံထဲမှ အောက်ကပုံနှစ်ပုံပုံမှာ ပုံနှစ်ခုထဲကမှ တြိဂံပုံလေးလိုမျိုး အမျိုးစားတူတဲ့ တြိဂံလေးကိုအသုံးပြုပြီး တံတားအဖြစ် ဆက်စပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အခြားထို့ထက်ပိုမိုတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေ အသုံးပြုပြီး family relations မိသားစုတစ်ခု ဆက်သွယ်သလို ဆက်သွယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကားချပ်တစ်ခုလုံးစာအတွက် ပြည့်စုံတဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိနေတဲ့
ပုံသဏ္ဍာန်တွေကို ရရှိလာပါမယ်။ အခြား တြိဂံတစ်ခုကို ထပ်ဖြည့်ပြီး မျဉ်းတစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ပေးလိုက်သလိုမျိုး ဆက်စပ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာမျိုးတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ ခုဆိုရင် ဒီဇိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းထားသိုမှု တစ်ခုဟာ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းမှာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိနိုင်လောက်ပါပြီ။ ဗိသုကာတွေအနေနှင့် အဲဒီလိုမျိုး စုစည်းထားသိုဖို့အတွက် composition ကို သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေမှာ ဘယ်လိုများ လုပ်ဆောင်တတ်သလဲလို့ ထင်မိပါသလဲ။ သူတို့တွေလည်း သူတို့တွေရဲ့ အဆောက်အအုံတွေမှာ ပုံသဏ္ဍာန်(shapes)၊ မျဉ်း(lines)၊ အရောင်(colors) စတဲ့အရာတွေနှင့်ပဲ ပြုလုပ်ကြရတာပါ။
အောက်မှာပြထားတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက Horyu-ji Temple မှာဖန်တီးထားတဲ့ ဗိသုကာပညာရှင်ဟာ ကွဲပြားတဲ့ ပုံ(form) အမျိုးမျိုးကို တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင် လိမ္မာပါးနပ်စွာ စုစည်းဖွဲ့သိုထားပါတယ်။
အဲလိုပြုလုပ်ထားရာမှာ ဘယ်အရာတွေဖြစ်မလဲ။ ရှည်လျားပြီး ရစ်သမ်ကျမျဉ်းသဖွယ် ဖြစ်နေတဲ့ ပုံမျိုးနှင့် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို ဆက်သွယ်ပေးထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တူညီတဲ့ အချိုးအစား(propotion)၊ တူညီတဲ့ ဟင်းလင်းပြင်(space)၊ တူညီတဲ့ အမိုး(roof line)၊ နှင့် တူညီတဲ့ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။
ကျနော်တို့အနေနှင့် composition ကိုလေ့ကျင့်သင်ယူရာမှာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဂရုပြုလေ့လာခြင်းပါပဲ။ သစ်ရွက်ကလေးတွေမှာ ပါတဲ့ အကြောမျှင်လေးတွေဟာ
မြို့တစ်မြို့ရဲ့ မြေပုံတစ်ခုနှင့် သဏ္ဍာန်တူနေတတ်ပါတယ်။ အခြားအရာနှင့်တူတာကတော့ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာက သွေးကြောမျှင်လေးတွေနှင့် သဏ္ဍာန်တူနေတတ်တာပါ။ အဲဒီလိုပဲ ကျနော်တို့
ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ သဏ္ဍာန်တူတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ အနေနှင့် များစွာရှိပါတယ်။
ပုံမှာပြထားတဲ့ သဏ္ဍာနှစ်ခုဟာ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးနှင့် လိမ္မော်သီးတစ်လုံးပုံပါ။ သူတို့ဟာ သစ်သီးအဖြစ်အမျိုးအစားတူကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သဏ္ဍန်ဟာ မျဉ်းကွေးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားတာလည်း
တူကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပြင်ညီတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာပဲ တည်ရှိနေကြပါတယ်… စတဲ့ အချက်တွေဟာ တူညီကြပါတယ်။ အခြားမတူတဲ့ အချက်တွေကတော့ တစ်ခုကရှည်ပြီး တစ်ခုက ပုလုံးတိုပါ။ တစ်ခုက ဘယ်ဘက်မှာရှိပြီး တစ်ခုက ညာဘက်မှာရှိပါတယ်။ တစ်ခုက တခြားနေရာ တစ်ခုကို ညွှန်နေတဲ့ပုံ ရှိပြီး အခြားတစ်ခုက အဲဒီမှာပဲ တည်နေပါတယ်။ တစ်ခုက ကားချပ်ဘောင်ကို ထိစပ်နေပြီး အခြားတစ်ခုကတော့ လွတ်လွတ်ကင်းကင်း ကားချပ်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလိုပုံစံဖြင့်လေ့လာပြီး သူတို့တွေရဲ့ တူညီမှု၊ မတူညီမှု၊ ကွပြားမှု၊ မကွဲပြားမှုတွေကို လေ့လာပြီး သူတို့တွေကို
ဘယ်လိုဆက်စပ်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး အသင့်တော်ဆုံး ဒီဇိုင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပြုလုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာ ပိုမိုပြုလုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
အထက်ပါဥပမာကဲ့သို့ ပစ္စည်းနှစ်ခုရဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေကို ဆန်းစစ်လေ့လာပြီး ကျနော်တို့တွေရဲ့ ဒီဇိုင်း အသိအမြင်တွေကို ထက်မြက်အောင် လေ့ကျင်ပျိုးထောင်ပေးသင့်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အမြင်ဆိုင်ရာ ဖြစ်စေ… အနံ့ဆိုင်ရာဖြစ်စေ… အသံဆိုင်ရာဖြစ်စေ… အထိအတွေ့ ဆိုင်ရာဖြစ်စေ… အရသာဆိုင်ရာဖြစ်စေ စတဲ့ အာရုံငါးပါးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး
ဆက်စပ်နေတဲ့ တနည်း family ဖြစ်တဲ့၊ relationship ဖြစ်နေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို သေခြာခွဲခြားသိနိုင်ပြီ ဆိုရင်… ကျနော်တို့တွေအနေနှင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရာမှာ composition အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်ထားသိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အောက်ကပုံတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ composition အသုံးပြုထားပုံတွေ ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်…။
Romanesque cathedral at Hilsesheim, Germany,
ဒီပုံမှာဆိုရင် ဂျီသြမေတြီဆိုင်ရာပုံအမျိုးမျိုး (pramids, cubes, cones and planes….) အစရှိတဲ့ ပုံတွေကို ဆက်စပ်အသုံးပြုပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းတစ်ခုပါ။
အခြားအခြားသော အဆောက်အအုံများမှာလည်းယခုလို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းများကို လေ့လာနိုင်မှာပါ။
တကယ်တော့ ဖွဲ့စည်းထားသိုခြင်း composition ဆိုတာ ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာမှာသာမက ကျနော်တို့လူသားတွေရဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရော လူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်ရဲ့ မတူညီတဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ၊ မတူညီတဲ့ သဘာဝတွေ၊ တူညီတဲ့ စရိုက်တွေ၊ တူညီတဲ့ သဘာဝတွေ စတာတွေကို composition ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဟာလည်း မိသားတစ်စု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ ရပ်ကွပ်တစ်ခု၊ မြိုရွာတစ်ခု၊ နိုင်ငံတစ်ခု အတွက် အင်မတန်အရေးပါလှတယ်ဆိုတာ တွေးတောမိပါတယ်…။ နောက်ဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုသာမက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၊ စကြာဝဠာကြီးအထိ အဆုံးစွန် သတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု ဆက်စပ်မှုတွေကို နားလည်ခံစားနိုင်မည်ဆိုရင်ဖြင့် လောကသဘာဝရဲ့ စုစည်းပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်းရဲ့ အလှတရားတွေကို မြင်တွေ့ခံစား အသုံးချနိုင်မည်ဆိုသော အတွေးလေးကို စိတ်ကူးယဉ် ဖြန့်ကျက်တွေးတောမိပါကြောင်း။
Posted in Design Theory | LeaveaComment »